Shirwenaha Miljöpartiet oo Umeå ka furmay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Åsa Romson iyo Gustav Fridolin markii loo doortay xoghaynimada xisbiga Miljöparti. Foto: Erik Mårtensson/Scanpix.
Shirwenaha Miljöpartiet oo Umeå ka furmay
La daabacay fredag 25 maj 2012 kl 10.30
Cimilada iyo siyaasada Iskuulka ayaa la filayaa in looga hadlo kongreska xisbiga Miljöpartiet oo maantay ka bilowday magaalada Umeå.
Anders Wallner, xog hayaha Miljöpartiet ayaa ku dooday inta dowladda aysan ka soo bixin balan qaadkeeda siyaasada cimilada iyo hadafka ka hortagida qiiqa hawada sumeeya.
- 2010 waxaa kor dhay qiiqa hada sumeeya, waana la yaab in doodii badnay sannadyaadaas oo kor u qaaday garashada dadka in maantay arimahaas ahayn ku ahmiyad lasiiyo oo la iska indho tiro saamaynta ay yeelan karto hadaan xal aanaan u helin, ayuu yeri Anders Wallner.
Sidoo kale waxa uu Wallner sheegayn in ay dowladdo ka bad badinayso marka ay ku faanto in Sweden leedahay siyaasada ugu wanaagsan caalamka marka laga hadlayo siyaasada cilmilada. Dowladda su'aalahaan aad bayn ugu leedataa ayuu yeri, taasna waxay keentay in dadka leh garashada cimlilada in ay mas'uuliyad weyn iska saaraan.
- Waxa aan dereemaynaa in dad badan ay maantay sameeyaan sida ugu wanaagsan oo ay ugu taxadari lahaayeen cimilada, waxay dib u eegid ku sameeyeen qaabka ay u dhoofaan, adeegooda iyo nooca korantada ay isticmaalaan. Lakiin su'aalahaan la xiriira cimiladaa waa mid salka ku haya qaab dhismeedka siyaasada. Sweden waxay u baahantahay ayuu yeri siyaasad dib casriyeeneed oo lagu sameeyo korontada iyo isgaarsiinta aasaasigaa.